हाम्रो भिडियोफोनले बिग्रेको दृष्टिबाट मद्दत गर्दछ - Konnekt
दृष्टि बिग्रेको छ
ठूलो र सरल
फोनका लागि दृष्टि बिग्रेको छ
EASILY प्रियजनहरूसँग आमनेसामने कुरा गर्नुहोस्। को Konnekt भ्वाईडफोन, न्यून दृष्टि भएकाहरूको लागि कम दृश्य फोन, देख्न र प्रयोग गर्न सजिलो छ, ठूलो १ 15 इन्च स्क्रीन र विशाल (१ 15 सेमी चौडा) एक-टच बटनलाई धन्यवाद। बटन आकारहरू, पाठ फन्ट र रंगहरू समायोज्य छन् त्यसैले यदि तपाईंको दृष्टि बिग्रन्छ भने, द्रुत कल Konnekt यो लाग्छ सबै छ। त्यहाँ कुनै कुञ्जीपाटी, माउस वा लगइन छैन, र स्वत: उत्तर नामित छोरा, छोरी र केरियरका लागि उत्कृष्ट छ जसले तपाईंलाई पुग्न सक्दैन तर अन्यथा चिन्ता गर्ला।
यो Konnekt कम दृष्टि फोन / भिडियो फोन व्यक्तिहरूको लागि अनुकूलित छ जुन अझै देख्न सक्दछ, तर सानो बटनको साथ समस्या छ।
प्रभावशाली cm 38 सेमी स्क्रिनले तपाईंलाई आफ्नो प्रियजनको अनुहारहरू हेर्न दिन्छ, वास्तविक जीवनमा जति ठूलो तपाईं कुनै पनि समय एक मुस्कान साझा गर्न सक्नुहुनेछ!
यदि तपाईं चश्मा लगाउनुहुन्छ तर जवाफ दिन हतारमा तिनीहरूलाई समात्नुहोस्, चिन्ता लिनु पर्दैन। भिडियोफोनले तपाईंलाई जवाफ दिन प्रशस्त समय दिन्छ। त्यहाँ एक विशाल हरियो उत्तर बटन र रातो अस्वीकार बटन छ। उठाउन वा समात्नु केहि छैन। र यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने हामी यसलाई छनौट गरिएको परिवार, साथी वा हेरचाहकर्तालाई जवाफ दिन सेटअप गर्न सक्छौं।
कम दृष्टि र अन्धोपन
अष्ट्रेलिया भित्र, सम्पर्क Konnekt साथी क्वान्टम RLV.
कम दृश्य फोन विशिष्ट विशेषताहरू
बिग बटनहरू, 15 सेमी चौंडासम्म। ठूलो पाठ।
सरल प्रयोग गर्न। कल गर्न वा जवाफ दिन एक प्रेस। कुनै किबोर्ड, माउस वा ह्यान्डसेट छैन।
बिग 15 इन्च स्क्रीन। दृष्टिविहीनहरूका लागि आदर्श।
उच्च कन्ट्रास्ट रंग थिमहरूको दायरामा।
व्यक्तिगत लेआउट, फन्ट, पाठ, र colors्ग, आकारहरू।
लाउड - एक दूरीमा कुरा गर्नुहोस्। यो घर भरबाट सुननुहोस्।
समायोज्य घण्टी अवधि। तपाईको चस्मा फेला पार्न धेरै समय।
टेलमार्केटरहरू वेवास्ता गर्नुहोस्। अपरिचितहरूबाट कुनै कलहरू छैनन्।
हामी यो सबै गर्छौं: सेटअप, निजीकरण, तपाईंको सम्पर्क स्काइपमा जान मद्दत गर्दै, विशेष स्थापना र ईन्टरनेटको साथ पनि मद्दत गर्नुहोस्।
आमने सामने कलले सामाजिक अलगाव कम गर्न मद्दत गर्दछ।
स्वत: उत्तर विश्वसनीय क्यारियरहरूको लागि विकल्प। जब तपाईं जवाफ दिन सक्नुहुन्न तिनीहरूको चिन्ता कम गर्नुहोस्।